कास्टिलो डे कोलोमेरेस, एक धेरै आधुनिक महल यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मैलेंगा, के हेर्ने
युरोप भरिएको छ किल्लाहरू सबै प्रकारका र उमेरहरूको, र स्पेनमा त्यहाँ छनौट गर्न केहि धेरै छ। तर आज हामीसँग मध्ययुगीन निर्माण छैन वा भग्नावशेष वा राजाहरूको निवास स्थान छैन, तर वास्तवमै आधुनिक, नयाँ, नयाँ ताजा महल, ओभनबाट ताजा छ, हामी भन्न सक्छौं।
यो बारेमा छ कोलोमेरेस महल, तपाईंले फोटोमा देख्नु भएको कुरा। यो मालागामा छ र सायद शायद उहाँ तीस वर्षको भयो। के तपाई यसको इतिहास जान्न चाहानुहुन्छ? त्यसो भए सुरू गरौं ...
यो सुरुचिपूर्ण निर्माण मालागाको प्रान्तमा बेनेलमाडेनामा छ, स्पेन, र जब मैले भने कि यो मुश्किल its० औं वार्षिकोत्सवमा मात्र हो यो सत्य हो: यो १ late s० को उत्तरार्धमा निर्माण गरिएको थियो ईंट, सिमेन्ट र ढु with्गाको साथ।
यसको इतिहासबाट सुरू गरौं किनकि तपाईं सायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि कसले यो सानो किल्ला बनाउने सोचेको छ। ठिक छ, यो वास्तवमा एक स्मारक हो,aमहल-स्मारक क्रिस्टोफर कोलम्बसको कामलाई सम्मान गर्दछ र उनको बहादुर साहसीहरूको समूह जो १ 1492 XNUMX २ मा समुद्रमा बाहिर निस्के।
यसको सिर्जनाकर्ता, आविष्कारक, जीवका बुबा हुनुहुन्छ डा। एस्टेबान मार्टन मार्टेनभनिन्छ, २००१ मा उनको मृत्यु भयो। भनिन्छ कि जब उनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा डाक्टरको रूपमा काम गरे, अमेरिकाले पत्ता लगाएको वास्तविक अवस्थाको बारेमा अमेरिकीहरूलाई थोरै ज्ञान भएकोले उनी छक्क परे, त्यसैले उनी काममा फर्किए।
यो १ 1987 XNUMX को कुरा हो र डा। मार्टेनले आफ्नो कामलाई दिमागमा राखिसकेका थिए। त्यो वर्ष सुरु भयो र कामहरू १ 1994 XNUMX in मा समाप्त भयो। उनले केवल दुई मेसनका साथ काम गरे किनकि उनी वास्तुकला, डिजाइन, कला र चिनाउनमा अलि बढी जानकार थिए। अमेरिकाको आविष्कार कथन गर्ने निश्चित विचारको साथ, उनले ती सबै वर्षहरू काम गरे र काम गरे। जब त्यहाँ पैसा थियो, काम भएको थियो, कहिले भएन, कामहरू रोकियो। काम गर्न को लागी घण्टा थिएन र तिनीहरूले एक्लै सम्पूर्ण भवन खडा गरे किनभने दुर्भाग्यवश यसलाई आधिकारिक र रूढीवादी क्षेत्रहरुबाट धेरै समर्थन छैन।
कोलम्बसले क्याथोलिक राजाहरूको आर्थिक समर्थन कसरी प्राप्त गर्‍यो, कसरी उनले पिनजानको नाविकहरू लिन सहयोग गरे र उनका जहाजहरूले August अगस्त १ 3, १1492 33 २ मा पालोस बन्दरगाह छोडे भनेर सम्पूर्ण संरचनाले बताउँछ। केवल days XNUMX दिन पछि तिनीहरू अमेरिकामा थिए, त्यहाँका निवासीहरूले टापुमा इगुआनास को र स्पेनिशलाई सान साल्भाडोर भनिन्छ। यी सबै र अझै धेरै महल भर ढु stone्गा मा वर्णन गरिएको छ।
मार्टिन एलोन्सो पिन्ज़नलाई याद गर्न त्यहाँ छ काँसाको घोडा टाउको, समुद्री पेगासस जस्तो केहि। त्यहाँ पनि छन् कास्टाइलको ढाल, काँसामा र भित्र एउटा सानो कोठा छ र त्यसले वक्ताको रूपमा काम गर्छ र यसमा ख्रीष्टको छवि र एउटा नाविक घण्टी छ जुन उक्त अभियानले अघि बढेको पहिलो टापुको सम्झना गर्दछ।
यो यो वक्तृत्वको बारेमा भनिएको छ कि यो छ संसारको सब भन्दा सानो चर्च किनकि यसको केवल १.1 square वर्ग मीटर छ। ठिक छ, यो गिनीज बुक अफ रेकर्डमा छ त्यसैले यो सत्य हुनुपर्दछ ...
साथै पिन्टा, निना र सान्ता मारिया प्रतिनिधित्व गर्दछ। पिन्टा मुख्य कवचमा छ र पेगासस, पौराणिक घोडाले समातेको छ, केटी भवनको माथि छ रबिडाको माथिल्लो भागमा, एक प्रसिद्ध मठ हो जसले कोलम्बसलाई पोर्चुगलबाट आउँदा आश्रय दिएको थियो; र अन्तमा सान्ता मारिया, अन्य दुईबाट अलग्गिएको थियो र यो दुखद तथ्यलाई सम्झँदै वर्तमान क्रान्तिकारी क्रिसमसमा हराएको जहाज थियो जुन सान्तो डोमिंगोमा हालको थियो। भारतीयहरूले आफ्ना cre 39 चालक दलका सदस्यहरूलाई मारे।
क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिकाको चार यात्रा गरे र ती कारनामहरू विशाल र सुन्दर गथिक शैलीको गुलाब विन्डोमा छन्। यस मौलिक तरिकामा, डा। मार्टन मार्टन स्पेनको यो भाग चाहन्थे, जुन एउटा देश थियो जुन नयाँ विश्वको खोजीमा मुख्य भूमिका खेलेको थियो, यस साहसिक कार्यलाई निश्चित तरिकाले सम्मान गर्न। नतिजा? हो यो छ केही kitsch र धेरै मानिसहरूलाई यो मनपर्दैन। केहि अनौंठो रह्यो, न स्मारक हो न किल्ला ... तर उही कारणका लागि यो भ्रमणको योग्य छ।
र यो महल परिणाम हो, हडताल निर्माण जहाँ मुडेजर, गोथिक, बाइजान्टिन र रोमेनेस्क मिश्रित छन्। त्यहाँ निर्देशित पर्यटनहरू छन् र ती लिनको लागि यो धेरै सुविधाजनक छ किनभने त्यस तरिकाले तपाईं त्यस स्थानलाई कस्तो लाग्छ र यसको अभिप्राय के हो भनेर वास्तवमै कदर गर्न सक्नुहुन्छ।
कोलोमेरेस महलको बारेमा व्यावहारिक जानकारी
ठेगाना: फिन्का ला कार्राका एस / एन। बेनेलमाडेना।
समयः यसको वेबसाइटमा यसले घोषणा गर्दछ कि यो सोमबार र म Tuesday्गलबार बन्द छ। यी मितिहरूको लागि यो बिहान १० देखि दिउँसो १::10० र to देखि साँझ 1 सम्म खुल्छ। वसन्त र शरद itतुमा यो एक घण्टा पछि बन्द हुन्छ र ग्रीष्म itतुमा दिउँसो and र between बजे बीचमा खुल्छ।
मूल्यहरू: सामान्य प्रवेश शुल्क २ यूरो। बच्चाहरू र निवृत्तिभरणकर्ताहरूले १.2० यूरो तिर्छन्। २ than भन्दा बढी व्यक्तिको समूहका लागि आरक्षित गर्नु आवश्यक छ।
यसको भित्री भागमा हिंड्नु र समुद्रले प्रस्तुत गर्ने शानदार दृश्यहरूको आनन्द लिनुको अलावा यस ठाउँले पुस्तक प्रस्तुतिकरणहरू, सम्मेलनहरू, मध्ययुगीन बजारहरू, नाटकहरू, नृत्य प्रदर्शनहरू, कन्सर्टहरू र विभिन्न सांस्कृतिक भिडन्तहरू पनि राख्छ। थप रूपमा, यसले घोषणा गर्दछ कि कोलम्बियाई संग्रहालय छिट्टै खुल्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » मैलेंगा » कास्टिलो डे कोलोमेरेस, एक धेरै आधुनिक महल